Nei Kambani Yako Ichinofanirwa Kutevedzera Live Chat | Martech Zone
Takakurukura zvakanaka zvakawanda zvekubatanidza Live Chat pawebhusaiti yako mune imwe yedu kushambadzira podcast. Ive neshuwa yekugadzirisa mukati! Rarama rarama inonakidza mukuti iwo manhamba anopa humbowo hwekuti haingogone kubatsira chete kuvhara mamwe mabhizinesi, inogona zvakare kugadzirisa kugutsikana kwevatengi mukuita.
Vatengi vanoda rubatsiro asi, mumaonero angu, havadi kunyatsotaura nevanhu. Kufona, kufamba mumiti yemifoni, kumirira yakamira, uye kutsanangura nyaya parunhare kunogona kuvhiringidza. Panguva inopindurwa nemumiriri, mutengi anenge atosvotwa. Rarama mutauri inopa inokurumidza resolution nguva uye nekukurumidza mhinduro - ichipa irinani ruzivo rwevatengi.
Rarama hupenyu hwekutaura huri kuwedzera kukosha uye kubatsira seyevatengi yekudyidzana chikuva. Muchokwadi, mune imwe ongororo yakaitwa na Forrester, 44% yevakabvunzwa vakati kuva nemunhu mupenyu anopindura mibvunzo yavo vachiri pakati pekutenga pamhepo chimwe chezvinhu zvakakosha webhusaiti inogona kupa.
Iwo mamwe mabhenefiti emakambani akasanganisa mhenyu kutaura anosanganisira:
Kuwedzera kwekutengesa - 51% yevatengi vanogona kutenga. 29% yevatengi vanowanzoita kutenga nechisarudzo chekurarama chat kunyangwe kana vasingashandise.
Yakawedzera kutendeuka - Kununura Spa yakawedzera yavo yekushandurwa mwero ne30% ine mhenyu chat.
Kuwedzera kwekuchengetedza - 48% yevatengi vangangodzoka pawebhusaiti.
Kuwedzera zita rechiratidzo - 41% yevatengi vepamhepo vanovimba neyakagadzirwa kana vaona yekurarama yekutaura.
Kuwedzera kwevatengi ruzivo - 21% yevatengi vanoti chat inovabatsira kutenga pavanenge vachishanda. 51% yevatengi vanoisarudza iyo kubvumira nyore multitasking pavakamirira.
Urarame Chat Chat Platform Vanopa
Mamwe makambani ari muindasitiri ari BoldChat, Chatrify, ClickDesk, Comm100, RubatsiroOnClick, iAdvize, Kayak, Live Chat Inc., Live2Chat, Rarama RubatsiroZvino!, LivePerson, Yangu LiveChat, Olark, SightMax, SnapEngage, TouchCommerce, Yemunhu sewe, Velaro, WebhusaitiAlive, WhoosOn uye - vagadziri veiyi infographic - Zopim (with Zendesk).
Heano anoshamisa akazara infographic kubva Webhusaiti Inovaka, 101 Zvikonzero Nei Uchifanira Kugamuchira Live Chat:
Tags: BoldChatmuchiso mukurumbiratauriranaiChatrifyClickDeskComm100kupindukavatengi vanozivaRubatsiroOnClickiAdvizeKayako FusionLive ChatLive Chat Inc.Live2ChatLivePersonYangu LiveChatOlarkkuchengetwaKugonesa KugonesaSnapEngageYemunhu seweVelaroWebsite BuilderWebhusaitiAliveWhoosOnzendeskZopim
Nov 1, 2016 pa5: 54AM
Kunzwisisa kunoshamisa! Ini ndinogara ndichiifarira kana webhusaiti iine live chat ficha, inoita kuti zvive nyore kwazvo kupinda mukubatana nerutsigiro nyore.
Chinyorwa chakanaka chakanyorwa nezve Live chat kuti kuwedzere Kutendeuka uye kugutsikana kwevatengi Chikamu. Ini ndinoshandisa Live chat chishandiso muwebhusaiti yangu shanduko yangu inowedzera 70% uye zvakanyanya kukosha wangu mutengi mubvunzo mhinduro panguva inogutsikana mutengi kuwedzera kutengesa.